Home » News » Abuuritaanka Sun Pictures Sawirada: Joannah Anderson Waraysi
Abuuritaanka Sun Pictures Sawirada: Joannah Anderson Waraysi
Barashada sida loo noqdo xirfadle.
Adelaide, Koonfurta Australia- Rising Sun Pictures Waxbarashadu waxay u adeegtay sidii dhagaxa xoojinta ah ee farshaxanno badani ay u adeegsadeen inay ka dhigaan inay ka soo baxaan fasalka ilaa warshadaha. Joannah Anderson waa mid. Ka dib markii uu si guul leh u dhameystiray Barnaamijka Shahaadada Shahaadada ee RSP / UniSA 12 ee Barnaamijka Shahaadada Dhaqanka iyo Nalalka ee horraantii sanadkan, Joannah wuxuu kashifay shaqadiisii ​​ugu horreysay markii uu ahaa fanaankii Junior 3D ee nalalka dhalinyarada ee Technicolor ee saldhigga cusub ee filimka cusub ee Adelaide. Nidaamka Sale, Victoria wuxuu hadda ku jiri doonaa xirfadaha ay ka baratay 3D farsamooyinka muuqaalka muuqaalka ah si loogu isticmaalo waxqabadka mashaariic filim oo loogu talagalay shineemooyinka caalamka.
Joannah ayaa dhawaan la hadlay RSP wixii ku saabsan khibradeeda RSP, shaqo cusub iyo mustaqbalkiisa.
RSP: Halkee ugu horeysay ee aad ku baratay saamaynta muuqaalka?
Joannah Anderson: AIE (Akadeemiyadda Iskaashatada Akademiga) ee Adelaide. Waxaan ahaa 18 oo waxaan rabay in aan wax ka barto animation laakiin halkii aan ku noolahay, Sale, ma bixin wax. Sidii ay dhacday, waalidiintaydu waxay qorsheynayeen inay u guuraan Adelaide oo AIE markii la furay xilligaa, sidaas darteed waxaan u guuray iyaga.
RSP: Maxaad baratay?
JA: 3D animation iyo saameyn muuqaal ah. Waxaan bilaabay barnaamijka cayaaraha, laakiin ugu dambeyntii waxaa loo wareejiyay filim waxaana lagu kasbaday Dibloomada Sare ee Shaxda iyo Warbaahinta.
RSP: Maxaa kugu dhejiyey RSP?
JA: AIE wuxuu lahaa guri furan, mid ka mid ah afhayeenka ayaa ka yimid Rising Sun Pictures. Waxaan u maleynaayey inaan shaqo aan toos ah loo soo bandhigin dugsiga, waxaan ku heli lahaa khibrad dheeraad ah RSP.
RSP: Sideed u aragtay kooraska?
JA: Xaqiiqdii waxay ahayd feejignaan. Waxaad ka shaqeyneysaa jawi studio oo wax ka barataa xirfadlayaasha, waadna la xiriiri kartaa wakhti kasta. Waxaan dareemay dareenkeyga sida studio-da waaweyn, sida ay dadku u dhexgalaan. Koorsadani waxay ahayd barnaamijka Shahaadada Shahaadada ee Shahaadooyinka Dhaqanka iyo Nalalka. Waxaan inta badan isticmaalnay Houdini. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee isticmaala software-ka.
RSP: Miyey kugu adagtahay in aad kor u kacdo?
JA: Xoogaa yar. Qaar ka mid ah saaxiibadayda waxay la kulmeen Houdini, sidaa daraadeed waxaan qabsaday qaar ka mid ah in ay qabtaan. Laakiin dhammaantood way i caawiyeen. Fikradda ayaa ka duwanayd software ka hor inta aan hore u isticmaali jiray, laakiin markii aan helo kalsooni, way fududayd.
RSP: Miyaad ka heshay kooraska?
JA: Haa, waan jeclaaday! Waxay ahayd mid cajiib ah.
RSP: Miyuu mid ka mid ah macallimiintaa saameyn gaar ah ku yeeshay?
JA: Haa. Greg iyo Sam, macallimiintii iftiimiyay, ayaa isbedelay fikradda guud ee nalalka. Markii aan ku biiray koorsada, waxaan u maleynayay inaanan weligay xiiseynayn nalalka. Waxaan rabay in aan tago VFX, laakiin badhkeed ayaa dhex maraya. Greg ayaa na tusay wali Monsters, Inc. waxayna tilmaameen faahfaahinta nalalka, sida aad u isticmaali lahayd iftiin si aad u soo qaadato midabada qaarkood. Waxa uu ahaa mid aad u xiiso badan oo ku saabsan, iyo in ay sara kiciyeen aniga. Waxaan bartay in aad sheeko sheegi kartid nalalka, ama toos ugu digtoonow indhaheeda meelaha ay ka midka yihiin filimka. Waxa uu si toos ah u baray sida loo iftiimiyo farshaxanka.
RSP: Intee ayaa xirfadlayaashu ay isbeddeleen toddobaadyadii XNUM?
JA: Way fiicnaadeen, aad u dhaqso badan. Markii aan codsaday RSP, uma maleynayo in la aqbali doono. Waqtiga aan dhammeeyey koorsada, waxaan lahaa bandhig farabadan oo aan jeclaa. Waxaan u direy Technicolor kalsooni ah inaan fursad u helay in aan shaqeeyo. Waxaan dareemay fiicnaan badan oo ku saabsan aniga naftayda ku riixaya koorsada.
RSP: Marka laga soo tago tababarka farsamada, maxaad ka baratay sidii aad uhesho farshaxan xirfad leh?
JA: Waxaan kaqayb galnay kulanno nolol maalmeed ah oo aan la kulannay dhammaan heerarka xirfadlayaal xirfadlayaal ah oo nagala hadlay shaqadooda. Waxaan sidoo kale qabannay dhowr jeer oo lala yeesho qorayaasha oo nagu siiyay talo ku saabsan sida loo dalbado shaqooyinka, sida naftaada loo qabanayo waraysiyada, iyo shaqo-bixiyayaashu waxay raadiyaan bandhigyada. Taas ayaa iga caawisay waraysiga shaqada.
RSP: Barnaamijku miyuu ka soo baxayaa waxyaabaha aad ka filayso?
JA: Way dhaaftay. Marka ugu horeysa, waxaan u maleynayay in ay noqon doonto mid aad u adag, inaanan waxba fahmin. Laakiin taasi waxay u muuqatay inaysan run ahayn. Dhammaan wixii aad sameysid waa inaad adigu u diyaargarowdana aad u shaqeysaa. Saddex bilood, Rising Sun Pictures ayaa i baray sida loo noqdo xirfadle.
RSP: Sidee baad ugu shaqaysay Milliga?
JA: Waxaan haystaa ilmo adeer oo ka shaqeeya warshadaha oo waxay ii sheegeen in Technicolor uu u yimid Adelaide. Waxaan codsaday on whim. Laba toddobaad kadib, waxay iigu yeedheen wareysi. Laba toddobaad kadib, waxaa la igu siiyay shaqo.
RSP: Wanaagsan. Hambalyo!
JA: Mahadsanid. Waxay ahayd tababar wanaagsan iyo waqti fiican.
RSP: Muxuu shaqo kuu qabanayaa?
JA: Hadda waxaan ku tababaranayaa waaxda iftiinka. Haguma bilaabin wax soo saarka. Waxay isticmaalaan Katana. Sidaa darteed, waxan baranayaa barnaamij cusub oo cusub. Laakiin waa iska caadi. Aad ayay u egtahay Houdini.
RSP: Ugu dambeyntii waxaad ka shaqayn doontaa mashaariicda madadaalada.
JA: Filimada muuqaalka inta badan. Waxaan doonayay inaan ka shaqeeyo filimka tan iyo markii aan yaraa. Waa nooc shoog ah oo aan ka shaqeynayo filimada shaqadayda ugu horreysa.
RSP: Halkee baad rajeyneysaa inaad halkan ka tagto?
JA: Waan jeclaan lahaa inaan tago Vancouver ama London. Waxaan ku riyoodaa hal maalin inaan furo studio gaar ah. Laakiin taasi waa ka dib markaan sameeyo waxoogaa shabakad ah oo aan barto dadka.
RSP: Talo noocee ah ayaad ka heleysaa farshaxanno kale?
JA: Ku raaxeyso habka. Ha isku dhibin naftaada. Dhammaanteen waa inaanu bilownaa meel. Waxay qaadataa saacado badan si aad u noqoto qof xirfadle ah. Si adag u shaqee oo isku dhafo bandhig adag oo muujinaya qofka aad tahay. Ku kalsoonow shaqadaada oo waad heli doontaa. Haddii aad ii sheegtey sannadkii hore in aan u shaqeyn lahaa sida fanaan iftiin leh, waan qosli lahaa. Laakiin halkan ayaan ahay.
At Rising Sun Pictures (RSP) waxaan abuurnaa saameyn muuqaal oo muuqaal ah oo loogu talagalay ciyaaraha waaweyn ee caalamka. Abuurista sawirada muuqaalka leh waxay ku taallaa aasaaska jiritaankeena. Qalbigeenna kooxda talada leh, waxaa jira aqoon iyo xirfad kala duwan, waxay awood u siineysaa in ay si wadajir ah u wada shaqeeyaan si ay u xalliyaan dhibaatooyinka una keenaan muuqaal wanaagsan oo macaamiisheena ah. Waxaanu helnay waxoogaa muuqaal ah oo cajiib ah oo muuqaal ah oo shaqeynaya iyada oo la siinayo xalal cusub oo loogu talagalay shaqo farsamo ahaan murugsan. Waxaan heysanaa awooda iyo hibo tayo leh si aan ugu haboonaano baahiyaha macaamiisheena.
Filimada noocan oo kale ah waxaa ku jira mashaariicda 120 oo ay ka mid yihiin Tomb Raider, Peter Rabbit, Thor: Ragnarok, Logan, X-ragga: Qorraxda, Xilliga Ciyaarta Thrones 6, Legend Tarzan, Gods of Egypt, Pan, X-Menan: Maalmaha Mustaqbalka Hore, Xayeysiinta Ciyaaraha Gaajada, Farshaxanka Harry Potter, Culays, Wolverine, Prometheus iyo Great Gatsby.
Education Spears & Fiilooyinka Raadka Visual	2018-11-08
Previous: Calvary Chapel Modesto wuxuu u guuraa qolka kontoroolka, Dib u habeyn loogu baahin karo Pix BPswitch Isdhexgalka Wax-soo-saarka Is-dhexgalka
Next: Bannister Lake wuxuu ku dhawaaqay Iskaashiga Waalidiinta Mashruuca Mashruuca Mashruuca Habka Maqalka